Nederland waxay dib u soo celisay xayiraadihii COVID-19 iyadoo koror cusubi soo kordhay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nederland » Nederland waxay dib u soo celisay xayiraadihii COVID-19 iyadoo koror cusubi soo kordhay
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Nederland • News • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Raiisel wasaaraha Holland wuxuu sheegay in soodhoweynta iyo waaxaha cawayska ee habeenkii loo baahan yahay in la xiro sababo la xiriira kororka kiisaska noocyada faafa ee Delta ee noocyada faafa.
Nederland waxay dib u soo celineysaa xayiraadihii COVID-19 ee caweysyada, makhaayadaha iyo xafladaha muusikada.
Xanibaado cusub oo lagu soo rogay cudurada ku soo kordhay dadka da'da yar awgeed.
Dhammaan maqaayadaha iyo baararka ku yaal Nederland ayaa albaabada loo laabi doonaa saqda dhexe ilaa 6-da subaxnimo maalin kasta, halka muusigga tooska loo mamnuucayo.
Raiisel wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa ku dhawaaqay in dowlada Nederland ay dib u soo celineyso xayiraadihii COVID-19 ee caweysyada, makhaayadaha iyo xafladaha muusikada sababo la xiriira tirada sii kordheysa ee kiisaska cusub ee coronavirus ee dadka da'da yar.
Xayiraadaha dib loo soo celiyey ee COVID-19, oo la qaaday June 26, ayaa dhaqan geli doona berri subax waxayna joogi doonaan illaa 14-ka Ogosto, ayuu yidhi Rutte Jimcaha.
Isaga oo ka soo muuqday wasiirka caafimaadka Hugo de Jonge, ra'iisal wasaaraha ayaa sheegay in martigelinta iyo waaxaha cawayska ee habeenkii loo baahan yahay in la xiro sababo la xiriira kororka kiisaska noocyada faafa ee Delta ee fayraska.
Rutte wuxuu sheegay in dowlada ay hada u ogolaaneyso oo kaliya hal maalin munaasabadaha guud ee goobaha lagu buuxinayo seddex meelood labo meel, daawadayaashuna waa inay cadeeyaan talaalkooda iyo xaalada cudurka.
Dhammaan makhaayadaha iyo baararka ku yaal Netherlands sidoo kale waxay u baahan doonaan inay albaabada u xidhaan saqda dhexe illaa 6-da subaxnimo maalin kasta, halka muusigga tooska ah loo mamnuucayo.
Nidaamka tigidhada u oggolaanaya dadka in laga dhaafo sharciga kala fogeynta bulshada ayaa sidoo kale la hakinayaa illaa bisha soo socota, markaas oo ay dowladdu dib u eegi doonto xaaladda.
De Jonge wuxuu sheegay in dhawaanahan ay sii kordhayaan infekshannada inta badan ay saameeyeen dhalinyarada, laakiin wuxuu ka digay inay "lama huraan tahay" in dadka waayeelka ah ay sidoo kale ku dhacaan cudurka illaa ay dowladdu wax ka qabato.
Toddobaadkii ugu dambeeyay gudahood, tirada kiisaska cusub ee COVID-19 ee Nederland ayaa kor u kacay 103% marka loo eego toddobadii maalmood ee la soo dhaafay, falanqeyntii ugu dambeysay ee Machadka Qaranka ee Caafimaadka Dadweynaha iyo Deegaanka ayaa muujinaya.